करोडपति व्यापारीकी श्रीमती, जस्ले सहवासका क्रममा श्रीमान गुमाईन … – List Khabar
Home / रोचक / करोडपति व्यापारीकी श्रीमती, जस्ले सहवासका क्रममा श्रीमान गुमाईन …
करोडपति व्यापारीकी श्रीमती, जस्ले सहवासका क्रममा श्रीमान गुमाईन …
admin August 21, 2021 रोचक Leaveacomment 331 Views
काठमाडौं । यो दुनियाँमा समय–समयमा अनेक घटनाहरु घट्छन्, जुन सहजै विश्वास गर्न लायक हुँदैनन् । कुनै दम्पतीले आफ्ना साथिबारे केहि गलत्त कुरा थाहा पाएर ज्यान नै लिएको वा अलग भएर बस्न थालेको कुरा सुन्नु सामान्य जस्तै हो ।
आफ्ना श्रीमान वा श्रीमतीमाथि अरु कसैले हक जमाउन खोज्दैछ भने रिस उठ्नु नौलो कुरा होईन । तर नाइजेरियामा एउटा अत्यन्तै दुर्लभ घटना बाहिर आएको छ । त्यहाँ एक करोडपति पुरुषलाई उनका ६ जना पत्नीहरु मध्ये पाँच जनाले बारम्बार बलपूर्वक स’म्पर्क कायम गरेका थिए ।
उनीहरुले तबसम्म आफ्नो कार्यक्रम जारी राखे जबसम्म उनीहरुको श्रीमानको जीवन समाप्त भएन । ती पाँच श्रीमतीले आरोप लगाए कि उनी आफ्नो छैठौं र कान्छी पत्नीलाई बढी महत्व दिइरहेका थिए ।
त्यसको ब’दला लिन उनीहरुले पालैपालो आफ्नो श्रीमानसँग स’म्बन्ध कायम गरेका हुन् । पाँच श्रीमतीले त्यसरी स’म्पर्क राखेपछि ति पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
करोडपति व्यापारी यूरोको ओनोजा बिनू प्रान्तमा आफ्नो छैठौं अर्थात कान्छी श्रीमतीसँग स’म्बन्ध राखिरहेका थिए । नाइजेरियाको अखबार ‘डेली पोस्ट’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार सोही समयमा उनका पाँच अन्य श्रीमतीले कोठामा प्रवेश गरेर आफ्नो काम शुरु गरेका हुन् ।
ती पाँच श्रीमतीले तुरुन्तै ओनोजालाई सि’ध्याउने चेतावनी दिएर आफुहरुसँग स’म्बन्ध कायम गर्न बल गरेका थिए । ओनोजाले पाँच श्रीमतीको कुरालाई टार्न खोजे तर श्रीमतीहरूका अगाडि केहि सिप लागेन ।
कान्छी पत्नीसंग स’म्बन्ध राखेका उनलाई सोही तरिकाले स’म्बन्ध राख्न पाँच श्रीमतीहरुले आदेश दिएका थिए । ‘डेली पोस्ट’ ले रिपोर्ट गरेको छ कि ओनोजाको मृत्यु तब भएको थियो जब उनी श्रीमतीहरुको आदेश अनुसार पाँचौं पत्नीसँग स’म्बन्ध राख्दै थिए ।
उनीहरुले क्रम कसरी मिलाएका थिए भने छैठौं पछि पाँचौं, चौंथो, तेस्रो, दोस्रा र पहिलो श्रीमतीसँग स’म्बन्ध राख्नुपर्ने थियो । ओनोजाको छैठौं एवं कान्छी श्रीमतीका अनुसार ओनोजाको मृत्यु भएको देखेर पाँच जना श्रीमतीहरु जंगलमा भा’गेका थिए । केहि दिनको अन्तरमा सबैलाई पक्राउ गरेर कारागार पठाइएको हो ।
Previous घरमा अचानक कमिला देखिनु कस्तो संकेत ? तपाईको घरमा पनि छन् की ?
Next नियमित शारीरिक सम्बन्ध राख्ने म हिलाहरु कसरी चि निन्छन् ?
बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन, म नारी स्वतन्त्रता र आफ्ना लागि आफै नियम बनाउने …